Amniga dawlada oo gabi ahaanba fashilmay iyo madaxa fasaadka oo cabsi gashay! - SomaliNet Forums
Postby sahal80 » Fri Mar 04, 2016 7:38 am
Allah yalcan al faasid garguurte muxuu waqti naga lu miyay kaagadarane wuxuu rabaa inuu soo noqdo!
Malaayiintii turkiga siiyeen wuxuu u adeegsadey kala furfurka hiiraan you maamul kale meeshii uu ciidanka siin lahaa!
Allah yalcanak yaa xaraami!
Xildhibaanada baarlamaanka ayaa dhawaan ka sahiray amniga koonfurta dalka
Qof markii aan si hufan wax lagu siin dhibkeeday leedahay; mp godah ayaa wuxuu sameeyay predict cajiib ah....wuxuu tiriyay ilaa 10 magaalo oo shabeelada hoose oo al shabaab ku soo noqotey iyo culays saaran buuloburde, jalalaqsi yo jowhar!
Dabcan ntaas ma keeni karaan ciyaalka tuuryare iyo odowaa oo ku toosa dhibka
Wasiirka amniga waxba ma aha waayoo ta liyaasha iyo gobolka banaadir kama amar qadanayaan sidii muungaab oo wadooyinka hotelada furayay hadana waad aragtaan markii loo furay xasuuqa iska socda!
Mooryaan tuuryare oo magac qabiil meesha ku jooga oon lahayn wax muahaalaad cilmi ah ayaa diiday inuu wasiirka amniga usoo raaco baarlamaanka, sida goodax sheegay shan jeer ayuu diiday inuu golaha wasiirada yimaado!
Baarlamaanka oo fahansan meesha sartu ka qorontay ayaa ko yiri wasiirka amniga iska bax!
Waxaa loo yeeray raysulwasaaraha oo uu tuuryare soo raacay, waxay diideen inay tuuryare dhageystaan uguna baaqeen inuu is casino wax suaalo ahna loo hayn!!
Meesha maba aha meel dawlad ka shaqayn karto!
Godah ayaa ku baaqay in maadama amnigii dalka oo gabi ahaanba faraha ka baxay wax saansaan amni ahna aysan muuqan, inuu dalku sugin karin bisha august!!
Durba culusoow waxuu bilaabay orod sida shir amni oo uu gudoomiyo markii ugu horeysay mudo ka badan sanad!!
Maaweelo cusub oo ah in amniga gobolka banaadir la hoosgeeyo!!
Wuxuu soo wadaa scapegoating lagu badalayo wasiirka amniga iyo taliyaha nabad sugida!
http://caasimadda.com/xil-goodax-waa-in ... -dhegeyso/
http://www.radiomuqdisho.net/madaxweyna ... -muqdisho/
Beesha laylkase oo Gabi ahaanba ka baxdey maamulka puntland.
by ramzy2277 » Tue May 19, 2015 3:49 am » in Politics - Puntland
Xisbul Islaam oo gabi ahaanba laga saarey Beled Weyne
by ciiseguure » Mon May 31, 2010 1:36 am » in General - General Discussions
Waa Suaal Da'weynoo Madaxa Daalineysee!!!
by guhad122 » Wed Apr 18, 2007 10:16 am » in General - General Discussions
SSC Hogaanka oo madaxa iskula jirta
by udun » Sun May 01, 2011 11:08 pm » in Provinces - Sool
Users browsing this forum: Bing [Bot], Murax, original dervish and 7 guests